Homeसमाचारसगरमाथाको अपमान गर्ने सुधिर चौधरीको रवि लामिछानेले गर्न खोजे डिएनए टेष्ट, यस्तो आयो नतिजा(भिडियो हेर्नुहोस्)
January 21, 2021 admin समाचार 6551
सुधिर चौधरी भा’रतीय न्यूज च्यानल जी न्यूजबाट लगातार नेपाल र नेपालीबारे अपमानजनक का’र्यक्रमहरु प्रशारण गरिरहेका छन् । तिनै पत्रकार चौधरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अन्तरवार्ता लिन नेपाल आए र लगत्तै सग’रमाथा पुगेर यसको नाम नै परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरे ।
लामिछानेको उक्त ट्वीटमा फरक प्रतिक्रिया आएक छन् । एक ट्वीटर प्रयोगकर्ता महेश श्रेष्ठ लेख्छन्, राम्रो नतिजा आवेसले होईन, विवेकले दिन्छ । अरु लाई दोष किनरु गल्ति हामी मै छ, कमजोर हामी नै छौं । कोठा चिटिक्क सफा राख्नुस अनि हेर्नुस कस्को बाउको मजाल कि जुत्ता लाएर भित्र छिरोस् । कोठा राख्नु हुन्छ फोहर, धुलै धुलो अनि जुत्ता लाएर आउने लाई रीस देखाएर कस्तो समाधान गर्ने तरीका हो यो?
अर्का ट्वीटर प्रयोगकर्ता सुजन पण्डीतले लेखेका छन्, अलि बढी नै खोकिएन र भन्या? अन्तर्वार्ता अघि संभावित प्रश्नका बारेमा जानकारी लिने चलन छ। तपाईं सेलिब्रेटी पर्नु भो, कसैले सुटुक्क नभनेकाले थाहा भएन होला । फेरि यति लेखे बापत हनुमान र अरिङ्गालको पगरी पक्कै पाइएला? टुँडिखेलतिर लगेर घुमाएर नाकको डाँडी भा च्ने विचार त छैन होला नि? – इताजा खबरबाट
November 8, 2020 admin समाचार 9372
नायि’का रेश्मा घिमिरे र मोडल तथा डान्सर विजु पार्कीले कार्तिक महि’ना मै बि’हे गरेका छन् । आईतबार मे’हन्दि थियो भने शनिवार गोदावरीमा बि’वाह भएको हो । यो बिवाह साँ’च्चिकै भने होईन । यो बिवाह एक
श्रीमानले बिजोग बनाएर छोडे,अहिले आफ्नो मृगौला बेचेर परिवार पाल्दै (भिडियो हे’र्नुस्)
April 15, 2022 admin समाचार 1157
न त एउटा खुट्टा छ न त एउटा हात नै । क’हिलकाहीँ पेप्सी बेच्थे त कहिले भोक भोकै हिँड्नु पर्थ्यो।’ यो कि’ड्नी बेच्ने भन्ने काम त गै र का नु नी कुराको रूपमा लिइन्छ त्यही
January 23, 2021 admin समाचार 6515